पाल्पामा ६ हजारको हाराहारीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु, दया नभई अवसर दिन आग्रह (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
पाल्पामा ६ हजारको हाराहारीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु, दया नभई अवसर दिन आग्रह (भिडियो)
१. पाल्पामा ६ हजारको हाराहारीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु, दया नभई अवसर दिन आग्रह
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संख्या समाजमा थपिदो छ । बिभिन्न कारणले हुने अपांगताको बढ्दो संख्या निराकरण तर्फ कसैको पहल भएको पाइदैन । तर सरकारले भने विभिन्न १० प्रकारले हुने अपांगताको वर्गीकरण गरि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अहिले स्थानीय तहमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
पाल्पामा मात्र ६ हजारको हाराहारीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको उपस्थिति छ । उनीहरुले स्थानीय तहमार्फत आर्थिकदेखि बिभिन्न सहयोग पाउँदै आएका छन् । तर उनीहरुलाई क्षमता अनुरुपको बिभिन्न सिपहरु सिकाएर स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउनु पर्ने आवाजहरु पनि उठन थालेका छ्न । यस्तो गर्न सकिए अपांगता भएका व्यक्तिहरु पनि आत्मनिर्भर बन्नतर्फ उन्मुख हुने थिए ।
२. बडादशैंका अवसरमा नाँचिने सराय नाँच अहिले बिभिन्न भेगमा विस्तार हुँदै
सराय नाँच पश्चिम पहाडी जिल्लाको मौलिक संस्कृति नै हो । दशैं र बिभिन्न चाडपर्वमा नाँचिने सराय नाँच गुल्मी जिल्लामा परम्परागतरुपमा नाँचिदै आएको लोकप्रिय नाँच पनि हो । विशेषत बडादशैंका अवसरमा नाँचिने सराय नाँच अहिले बिभिन्न भेगमा विस्तार समेत हुन थालेको छ । सराय नाँचको प्रतियोगिता नै आयोजना गरेर यस्को लोकप्रियतालाई थप कसी समेत दिन थालिएको छ । विशेषत कोत र मन्दिरहरुमा नाँचिने सराय नाँचले गाउँघरमा हुने वैमनस्य र विवादलाई समेत पखाल्दै आएको छ ।
३. पाल्पाका एक युवा स्थानीय जातको हराउन लागेका कुखुराहरु पालेर राम्रो आयआर्जन गर्दै
पाल्पाका युवाहरु बिभिन्न पेशा गरेर आत्मनिर्भरको बाटोमा लाग्न थालेका छन् । खाडीको गर्मीमा पसिना बगाएर आएका युवाहरुले देशको माटोको सुवासलाई पनि मन पराउँन थालेपछि बिभिन्न पेशा गरेर आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न थालेका छन् । कोही फलफूल खेती र त कोही तरकारी खेती , कोही बाख्रापालन त कोही कुखुरापालनमा लागेर मनग्ये धन आर्जन गर्न थालेका छ्न ।
कुखुराको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गर्दा पाल्पाका एक युवाले स्थानीय जातको हराउन लागेका कुखुराहरु पालेर राम्रो आयआर्जन गर्न थालेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा विगतका वर्षको तुलनामा कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी बढे
पुजारी बिरामी भएपछि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले स्थापना गरेको मन्दिरमा पूजापाठ बन्द
एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङ पनि प्रहरी नियन्त्रणमा
वीरेन्द्रनगर, १० माघ । कर्णाली प्रदेशमा विगतका वर्षको तुलनामा कुष्ठरोगका बिरामी घट्दो क्रममा रहेका भए
दान बहादुर बुढा मुगु, १० माघ । मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर १४